भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाले चाँडो पूर्णता पाउनुपर्छः नैनसिंह महर :: सामाजिक सञ्चार :: Samajik Sanchar
भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाले चाँडो पूर्णता पाउनुपर्छः नैनसिंह महर
सामाजिक सञ्चार बिहीबार, असार ९, २०७९
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले तत्काल पार्टीका भ्रातृसंगठनलाई पूर्णता दिन आग्रह गरेका छन्।
‘पार्टीका भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाले पूर्णता नपाउँदा काम गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ। क्याम्पस, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र सबै ठाउँमा भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको नेतृत्व जाम छ,’ उनले भने, ‘युवासँगै थुप्रै व्यक्ति बाहिर रहेकाले स्वतन्त्रहरू सलबलाउन थालेका छन्। राजनीतिप्रतिको वितृष्णा बढ्दो छ।’
‘जिम्मेवारीविहीनले के माग गर्ने? कसलाई काम लगाउने? अहिले धेरै युवा रनभुल्लमा छन्। अब यो परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ। पार्टीलाई जीवन्त पार्न भ्रातृसंस्थालाई पूर्णता दिनै पर्छ,’ महरले भने। यसले पार्टीलाई सशक्त र पुनर्ताजगी बनाउन सञ्जीवनी बुटीको काम गर्ने उनले बताए।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ९, २०७९ १७:०८
मंगलबार, असार ७, २०७९ देशको जुनसुकै क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिन्छुः रवि लामिछाने